Ukwelashwa kwe-hyperhidrosis: I-Botox emagqumeni
Ubuhle, Ukunakekela isikhumba
Abantu abaningi basebenzisa inqubo "Botox emagqabeni." Ngosizo lwakhe ungakwazi ukuqeda izifo ezihlukahlukene, ikakhulukazi ukukhukhumeza ngokweqile noma i-hyperhidrosis. Ngokuvamile, lo mlenze nezandla zihlupheka ngenxa yalesi sifo, kodwa futhi zingabonakala kwezinye izingxenye zomzimba. I-Botox ayinikezi ukwelashwa okuphelele kwe-hyperhidrosis, kodwa inganciphisa isimo.
Abesifazane abaningi kakhulu banquma ukujoba i-Botox emagumbini. Ukubuyekeza mayelana nale nqubo kuhlukile. Ukubikezela ukuthi ingabe umuthi uzosebenza kanjani-awukwazi. Konke kuxhomeke ekuphenduleni komzimba ngabanye. Futhi akunakwenzeka ukusho ngokuqiniseka ukuthi umjovo uzohlala isikhathi eside kangakanani. Ngokuvamile, umphumela womuthi ubalwa isikhathi sezinyanga ezintathu ukuya kweziyishumi.
Ngaphambi kokunquma ukujova umjovo Botox, udinga ukubonisana nodokotela. Ngakho uzofunda zonke izinzuzo nezindleko zenqubo, izinkinga ezingase zibe khona kanye nokuphikisana. Futhi ngemva kwalokho ungaqonda, ngakho-ke udinga i-botox emagumbini.
Okokuqala, udinga ukwazi ukuthi i-botox inezinkomba. Ngakho-ke, ayikwazi ukugwazwa ngesikhathi sokukhulelwa nangesikhathi sokuncelisa ibele, i-myasthenia gravis ne-myasthenic-like syndromes, i-hemophilia, izifo ezithathelwanayo eziyingozi, nokubekezelelana komuntu ngamunye kungase kwenzeke. Awukwazi ukwenza umjovo ngesikhathi sokuphulukiswa kwe-herpes futhi uma uthatha ama-anticoagulants namagciwane, ama-NSAID, i-Relanium. Kubalulekile ukucabangela ukuthi kubalulekile ukubeka imijovo ngendlela efanele futhi ngokulinganayo ukubala umthamo. Ukuze wenze lokhu, udinga kuphela ukuxhumana nochwepheshe oqinisekisiwe. Ngeshwa, kunezinhle ze-beauticians ezifuna ukugcina izidakamizwa. Ukuze umjovo we-Botox kubalulekile ukuthi ulinganise kahle umthamo, futhi kuyadingeka ukuthi udale isimiso semisipha ngendlela efanele.
I-Botox emagumbini ayifuni ukunikeza izinkinga. Ngesinye isikhathi kungase kube khona ukusabela okweqile kanye nekhanda, ukuzwa okuvuthayo nobuhlungu kwisayithi lokujola. Njengomthetho, izimpawu ezinjalo zidlula ezinsukwini ezimbili. Uma lokhu kungenzeki, udinga ukubona udokotela ngokushesha.
Ngaphandle kwezinkinga ezingase zibe khona kanye nokuphikisana, i-Botox e-armpit ibiza imali eningi. Lokhu kungenye yeziphakamiso eziyinhloko zabamelene nale nqubo. Inkinga ukuthi iBotox izoba nomthelela wesikhashana emzimbeni. Ngeke njalo kusetshenziswe ukuba usebenzise ukwelashwa kwe-hyperhidrosis.
Kukhona nombono wokuthi i-botox e-armpit inomthelela omubi emzimbeni. Ikakhulukazi, kubangelwa umdlavuza webele emadodeni. Kodwa ucwaningo lwesayensi luye lwafakazela ukuthi lokhu kuyindabakwane. I-Botox ithinta kuphela izindawo ezithile zomzimba, okusho ukuthi ngisho noma kuwela kwezinye izingxenye zomzimba, ngeke kube nomthelela omubi.
Naphezu kokuthi iBotox ivame ukufakwa emacansini abesifazane emva kweminyaka engama-30, kutholakala emtholampilo ukuthi njengendlela yokwelapha i-hyperhidrosis, inqubo ingenziwa kusukela eminyakeni engu-16. Kodwa ngenxa yalokhu kunesidingo sokuqala ukuthola ukubonisana nodokotela-isazi sezimoto, kuphela lapho ukwenza i-botox emagumbini. Intengo ifanele umphumela wokuqeda ukujuluka ngokweqile. Ikakhulu uma umphumela ukwanele cishe unyaka.
Ukuqothulwa kwesilisa nowesilisa kwezingxenye eziseduze. I-Cream yokuqothulwa kwezindawo eziseduze ekhaya: ukubuyekezwa, izinhlobo nokubuyekezwa
Ubuso nokuphakama kwentamo
Indlela yokukhulisa amashiya: amathiphu ambalwa
Ama-solarium ajwayelekile: incazelo, izici, izinzuzo kanye nokulimala kokushisa kwelanga ku-solarium
Indlela yokusebenzisa i-glycerin ebusweni ekhaya?
Njengoba kubonakala marsh iso umbala umlingisi womnikazi zabo
"Osterepar": imfundo manual, ukubuyekezwa, umakhi, analogue
Hero of Soviet Union Lukin uVladimir Petrovich: Biography, izimpumelelo ezithakazelisayo amaqiniso
Amakhandlela sea buckthorn: imfundo
Park "Northern Tushino". Ipaki "Northern Tushino" - ibhayisikili yokuqasha, swimming pool
Isidlo Lovely - ushizi amabhola
Solarium. Izimo futhi imithetho yokuziphatha
Fish nge amakhowe: ezimbalwa zokupheka athandwayo